Waxaa laga yaabaa Waqti aad dib uga fikirto Istaraatiijiyadaada Markii ... | Martech Zone
Friday, May 30, 2008 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Haddii aad waligaa kahadleyso awoodaada xalinta awooda kordhinta iibka - laga yaabee inaysan taasi aheyn wadada. Waxaan u diray goob saaxiibkey ah Jason, oo wuxuu ka helay kiiskan yar ee weyn ee daraasadda lagu hayo sida maqaaxi u riixday qiimahooda 1/2 qaaska ah iyo ku dhowaad labanlaabmay iibintooda.
Jun 1, 2008 saacadu markay ahayd 2:59 AM
Su’aashu waxay tahay, miyay labalaabeen iibkoodii units ama dollars? Uma baahnid inaan saxarroobo kan dambe…
Jun 1, 2008 saacadu markay ahayd 9:53 AM
Shaki kuma jiro in ay halkaas ka jirtay waxoogaa natiijo ah in macaamilku ku faraxsan yahay in uu gacan ka geysto qoritaanka warqad cad. Kaliya waa xulasho aad u xun oo loo dhigo 'Natiijo Ganacsi'.
Malahayga waa inay haysteen iib 1/2 qiimaha ah qaar ka mid ah alaabooyinka, laga yaabee inay yihiin kuwa wax cunaya, ka dibna waxay labanlaabmeen iibkooda guud macaamiil kasta oo soo galaya.
Jun 1, 2008 saacadu markay ahayd 8:42 AM
Maxaad ugu istaageysaa qiimaha 1/2? Waxay alaabta ku ridi karaan qiimaha 1/4 oo ay afar jibaaraan iibkooda!
Jun 1, 2008 saacadu markay ahayd 9:54 AM
Taasi waa waxa aan ka fikirayay! 🙂
Jun 2, 2008 saacadu markay ahayd 8:39 AM
Waxay i xasuusineysaa sheeko - ma ogi inay run tahay iyo inkale - oo ku saabsan nin labalaabay iibka daawada cadayga isagoo kordhiyay xajmiga godka tuubada.